Fakafaka : mila mahay mivarotra | NewsMada
Fakafaka : mila mahay mivarotra
Par Taratra sur 23/08/2016
Azo amidy tsara ny kolontsaina. Mba tsy hisian’ny fanambakana anefa, mila mahay mivarotra ny mpanakanto sy ny mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny kanto. Raha ny fanadihadiana natao, mandeha ila ihany io resa-barotra io eto amintsika. Matetika, mahazo ny ambilombazana ny mpanakanto raha mahazo be ny « mpanelanelana ».
Mitaky fahaizana ny fanaovana fifanarahana. Tsy ampy intsony ny fahaizana ny zavakanto fotsiny. Mitaky fanarahana fiofanana na fianarana ho an’ny mpanakanto io fahaiza-mifehy ny varotra io. Mila izany avokoa ny mpanakanto rehetra isan-tsehatra. Mbola vitsy rahateo ny mpanakanto malagasy manana olona manokana misahana ny resa-barotra miara-miasa aminy.
Mety mbola iharan’ny fanambakana hatrany ny mpanakanto malagasy raha malaina miofana momba ny fomba fanaovana fifampiraharahana… Saingy na te hiofana ny amin’izany aza izy ireo, mahalana dia mahalana vao misy izany eto Madagasikara !